Geopois.com - Waa maxay? - Geofumadas
Luulyo, 2020 Geospatial - GIS, tabo cusub
Waxaan dhawaan lahadalnay Javier Gabás Jiménez, Injineerinka Geomatics iyo Topography Engine, Master in Geodesy iyo Cartography - Polytechnic University of Madrid, iyo mid kamid ah wakiilada Geopois.com. Waxaan dooneynay inaanu gacanta koowaad ku helno dhammaan macluumaadka ku saabsan Geopois, kaasoo bilaabay inuu caan noqdo tan iyo 2018. Waxaan ku bilownay su'aal fudud, Waa maxay Geopois.com? Sida aan ognahay hadii aan galno su’aashan biraawsarka, natiijooyinka waxay kuxiranyihiin waxa la qabtay iyo ujeedada masraxa, laakiin daruuri maahan waxa ay tahay.
Javier wuxuu noogu jawaabay: "Geopois waa Shabakad Bulsheed oo ku takhasustay Teknolojiyada Macluumaadka joqoraafi ahaaneed (TIG), nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed (GIS), barnaamijyada barnaamijka iyo Khariidaynta Websaydhada". Haddii aan ka warqabno horumarka baaxadda leh ee tikniyoolajiyada sannadihii dhowaa, is dhexgalka GIS + BIM, wareegga nolosha AEC, ku daridda dareemayaasha fog fog ee la socodka, iyo khariidaynta shabakadda -taas oo had iyo jeer ka dhigaysa jidkeeda desktop desktop- waxaan fikrad ka heli karnaa halka uu Geopois tilmaamayo.
Sidee ayuu fikirka Geopois.com u yimid oo yaa ka dambeeya?
Fikradda waxay ku dhalatay 2018 sida baloog fudud, Waxaan mar walba jeclaa inaan qoro oo aan la wadaago aqoontayda, waxaan bilaabay inaan daabaco shaqooyinkayga jaamacadda, way kortay oo qaab ayey u noqotay waxa ay maanta tahay. Jacaylka iyo xiisaha badan ee inaga dambeeya waa Silvana Freire, waxay jeceshahay luqadaha, waxay ku hadashaa Isbaanish sifiican u yaqaan, Ingiriis, Jarmal iyo Faransiis. Bachelor of Maamulka Ganacsiga iyo Master of Falanqaynta Xiriirka Dhaqaalaha Caalamiga; iyo server-kaan Javier Gabás.
Maxay noqon lahaayeen ujeeddooyinka Geopois?
Ogaanshaha inay jiraan agabyo iyo istiraatiijiyado badan oo loogu talagalay dhisidda / falanqaynta xogta xog-waraynta. «Geopois.com wuxuu ku dhashay fikradda ah faafinta Macluumaadka Teknolojiyada Macluumaadka Juquraafiga (TIG), hab wax ku ool ah, fudud oo la awoodi karo. Iyo sidoo kale abuuritaanka beel ka mid ah xirfadlayaasha geosoolojiga iyo horumariyayaal iyo qoys xiiseeya juquraafi ahaan. ”
Maxuu bixiyaa Geopois.com bulshada GIS?
Mawduuc gaar ah: Waxaan ku takhasusay teknoolojiyada geospatial-ka oo leh maadooyin sare oo ka mid ah barnaamijyada iyo is-dhexgalka maktabadaha iyo APIS ee khariidaynta websaydhka, keydka macluumaadka iyo GIS. Iyo sidoo kale casharada bilaashka ah sida ugu fudud oo toos ah uguna macquulsan mawduuca ballaaran ee TIG teknolojiyada.
Isdhaxgal aad ugu dhow: Iyada oo loo maro barnaamijkayaga ayaa waxa suurtogal ah in lala macaamilo kuwa kale ee horumarineed iyo kuwa xiisaha u qaba waaxda, aqoonta la wadaago oo ay la kulmaan shirkadaha iyo horumariyaasha
Bulshada: Bulshadeena gebi ahaanba waa furan tahay, oo ay ku jiraan shirkadaha iyo aqoonyahannada qaybta, soosaarayaasha geospatial iyo xiiseeya teknolojiyadaha juquraafiga.
Muuqaal: Waxaan siinaa muuqaal dhammaan isticmaaleyaasheena iyo gaar ahaan iskaashatadayada, taageerista iyo fidinta aqoontooda. »
Xirfadlayaasha GIS, ma jiraan fursado ay ku bixiyaan aqoontooda iyada oo loo marayo Geopois.com?
Dabcan, waxaan ku casuumeynaa dhammaan adeegsadayaashayada inay la wadaagaan aqoontooda xagga casharada, qaar badan oo iyaga ka mid ah horeyba waxay si firfircoon oo xamaasad leh noola shaqeeyaan. Waxaan isku dayeynaa in aan ku duubno qorayaashayaga, aan siinno aragtida ugu badan oo aan ku siinno degel xirfad leh halkaas oo ay naftooda ku sheegi karaan oo ay kula wadaagi karaan waxa ay jecel yihiin ee adduunka.
Taas ayaa lagu yiri, iyada oo loo marayo sidan isku xirka Waxay gali karaan websaydhka oo bilaabi karaan inay qayb ka ahaadaan Geopois.com, oo ah tabaruc weyn dhammaan dadka xiiseynaya bulshada 'Geo' ee raba inay tababaraan ama bixiyaan aqoontooda.
Waxaan eegnay shabakadda tilmaamaysa "Geoquiet", Geoquiet iyo geopois.com waa isku mid?
Maya, kooxaha 'Geoquiet' waa bulshooyinka maxalliga ah ee OSGeo oo ah aasaaska hadafkooduna yahay in lagu taageero horumarinta barnaamijyada geospatial-ka ee furan iyo sidoo kale kor u qaadista adeegsiga. Waxaan nahay madal madaxbanaan oo aan wadaagno in badan oo ka mid ah fikradaha 'Geo-restless', danaha, walaacyada, waaya-aragnimada ama fikrad kasta oo la xiriirta cilmiga joomatikada, softiweerka bilaashka ah iyo tikniyoolajiyadda geospatial (wax walba oo la xiriira cilmiga GEO iyo GIS).
Ma u malaynaysaa in masiibada ka dib, habka aan u isticmaalno, u isticmaalno, oo wax u barano in uu qaatay wareeg aan la filayn? Xaaladdan caalamiga ah ma si wanaagsan ama si xun ayey u saamaysay Geopois.com?
Maahan wax la mid ah wareeg lama filaan ah, laakiin haddii ay horay u qaadatay horumar, gaar ahaan waxbarashada masaafada, e-barashada iyo m-barashada, isticmaalka aaladaha waxbarista iyo barnaamijyada barnaamijyada ayaa sii kordhayay dhowr sano, Faafida ayaa kaliya socodsiisay howsha. Annagu bilowgii marwalba waxaan dooran jirnay waxbarista khadka tooska ah iyo iskaashiga, xaaladda hadda jirta waxay naga caawisay inaan baranno inaan wax u qabno si ka duwan sidii aan u raadin lahayn dariiqooyinka kale ee shaqada, wadashaqeynta iyo horumarka.
Marka loo eego waxa ay bixinayaan Geopois, iyo imaanshaha marxaladda 4aad ee dhijitaalka ah Miyaad u tixgelineysaa tan falanqeeye GIS inay muhiim tahay in la ogaado / baro barnaamijyada?
Dabcan, helitaanka aqoonta ma dhici karto iyo fikradaha barashada ee barnaamijyada ayaa kuu anfacaya oo keliya. Kaliya maahan falanqeeyayaasha GIS, laakiin xirfad kasta, teknoolojiyadda iyo hal-abuurnimadu ma joogsan doonaan oo haddii aan diiradda saarno barteenna, waxay ila tahay in injineerada TIG ay tahay inay bartaan barnaamijka barnaamijka jaamacadda iyo asxaabta kale sida juqraafi ahaan, iyagoo og sida barnaamijku u kobcin lahaa. waxayna wanaajineysaa awoodaada inaad kula xiriirto aqoontaada. Sababtaas awgeed, casharradeenna ayaa si gaar ah diiradda loogu saarayaa barnaamijyada, horumarinta code ee luqado kala duwan, iyo is-dhexgalka maktabadaha Websaydhada Websaydhada kala duwan iyo APIS.
Maskaxda ma ku haysaa nooc mashruuc ama iskaashi lala yeesho shirkado, machadyo ama aalado hadda jira?
Haa, waxaan si joogto ah u raadineynaa fursadaha is-dhexgalka ee mashaariicda kale, shirkadaha, jaamacadaha iyo kulleejooyinka xirfadda leh. Waxaan hadda ka qeybqaadaneynaa barnaamijka ActúaUPM, barnaamijka ganacsiga ee Jaamacadda Polytechnic ee Madrid (UPM), kuwaas oo naga caawinaya horumarinta qorshaha ganacsiga si aan u hirgalinno mashruucan. Waxaan sidoo kale raadinaynaa wada-hawlgalayaasha teknolojiyadda si ay uga wada shaqeeyaan horumarka iyaga iyo in aan awoodno in aan ku biirno oo aan u abuurno dakhli shabakaddeenna soosaarayaasha geospatial.
Ma jiraa dhacdo soo socota oo la xidhiidha ama hagaysa shabakada 'geopois.com' oo bulshada GIS ka qayb qaadan karto?
Haa, waxaan rabnaa inaan sugno illaa xagaaga ka dib si aan u bilowno abuuritaanka isku xirnaan dheeri ah oo ka dhex dhaca isticmaaleyaashayada, qabashada websaydhyada iyo munaasabadaha shabakadda internetka. Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan abuurno dhacdo horumarineed oo khaas ah oo ku takhasustay teknoolojiyadda geospatial mustaqbalka dhow, laakiin tan waxaan weli ugu baahan nahay inaan helno kafaala-qaadeyaal si ay ugu tartamaan.
Maxaad ka baratay shabakada 'geopois.com', noo sheeg mid ka mid ah casharadii mashruucan kugu soo hadhay iyo sida uu koritaankiisu ugu jiray labadan sano?
Hagaag, aad u badan, maalin kasta waxaan wax ku barannaa casharrada ay iskaashigeennu noo soo diraan, laakiin gaar ahaan wax kasta oo ka kooban horumarka iyo hirgelinta masraxa.
Labadayaduba aniga iyo Silvana ma lahayn asal barnaamij ah, sidaa darteed waa inaan baranno dhamaan gadaasha iyo barnaamijyada barnaamijka serverka, keydka macluumaadka NOSQL sida MongoDB, caqabadaha horyaala UX / UI waxay diiradda saartey adeegsadaha, daruuraha iyo amniga daruurta iyo xoogaa SEO iyo Suuqgeynta Digital-ka ah ee wadada ... Caadiyan waxaad ka tagtay inaad noqoto jaangooyooyin loo yaqaan 'Geomatics' iyo 'GIS Specialist' oo loo yaqaan kobcinta Stack buuxa.
Sidee dhamaan mashaariicda ay ujireen kor iyo hoos, tusaale ahaan, markii aan bilownay sanadka 2018 waxaan ka tagnay tijaabinta Goobaha Google bilaha ugu horeeya ee aan ka hirgalineyno waxkasta oo WordPress ah, waxaan dooneynay inaan hirgalino khariidado fara badan oo aan iskugu geyneyno maktabadaha kaladuwan sida Openlayers, Leaflet, Mapbox, CARTO ... Sidaa daraadeed waxaan ku dhawaad ​​hal sano ku jirnay, tijaabinaayay isku xirka iyo tahriibka si aan u sameyn karno ugu yaraan waxa aan dooneynay, waxaan ku soo gabagabeynay inaysan shaqeynin, ugu dambeyntii xagaaga xagaaga 2019 oo aan uga mahadcelinayo aqoonta aan ka helay shahaadada Masterka ee geodesy iyo sawir gacmeedka. Laga soo bilaabo UPM (Javier) waxaan go'aansanay inaan soo gabagabeyno xiriirka aan la leenahay maareeyaha waxyaabaha isla markaana aan sameyno dhammaan horumarinteena, laga bilaabo gadaal ilaa safka hore.
Waxaan horumarinay madal qeybtii labaad ee 2019 iyo Janaayo 2020 waxaan awoodnay inaan soo bandhigno waxa hada ah Geopois.com, si kastaba ha noqotee, waa mashruuc ku socda isbeddello joogto ah waxaanan sii wadnaa inaan bil walba hirgalinno annaga oo gacan ka helayna ra'yi-celin ka timaadda bulshadeena, barashada iyo horumarinta. Haddii aan helno shabakadahaaga bulshada sida @Gepopois Twitter-ka, waxaan ka garan karnaa dhamaan deeqaha casharada, qaybaha iyo macluumaadka kale ee la xiriira. Waxaan aragnay mowduucyo badan oo xiisa leh, sida isticmaalka Tiles the Leaflet, xisaabinta falanqaynta xayeysiiska ee Daawada Websaydhada oo leh Turf.
Ka sokow casharada, waxay bixisaa suurtagalnimada helitaanka horumariye mashruucyadaada booska. Shabakad aqoonyahanno takhasus u leh, xirfadaha oo dhan ayaa halkaas lagu muujiyay si faahfaahsan, iyo sidoo kale meesha ay ku sugan yihiin.
Ma jiraan wax kale oo aad jeceshahay inaad ku darto wax ku saabsan geopois.com?
Waxaan ku faraxsanahay inaan u sheegno in ku dhawaad ​​150 horumariyayaal geospatial ah oo ka dhisan Spain, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Mexico, Peru iyo Venezuela ay horeyba qayb uga ahaayeen beesheena, LinkedIn waxaan ku dhow nahay oo aan gaadhnay 2000 oo raacsan waxaanna haysanaa 7 iskaashi oo usbuuc walba noo soo dirta casharo tayo sare leh oo tayo sare leh oo xiiso leh. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku guuleysanay in aan gudubno wejiga 1 ee 17 tartanka 'ActuaUPM' oo u dhexeeya 396 fikradaha iyo 854 qof. Laga soo bilaabo Janaayo 2020 waxaan sedex jeer labanlaabnay tirada booqashooyinka sicirkeena, sidaa daraadeed waxaan aad ugu faraxsanahay taageerada iyo xiisaha aan u abuurnay bulshada juquraafiga.
On Linkedin Geopois.com, hadda waxay leedahay ku dhawaad ​​2000 oo raaciyayaal ah, kuwaas oo ugu yaraan 900 ay ku biireen 4-tii bilood ee la soo dhaafay, halkaas oo aan ku soo wada marnay wejiga xiritaanka iyo xayiraadaha ee COVID 19. Ka fogaanshaha fakashada rajo la’aanta, inbadan oo kamid ah ayaa naga magan galnay aqoonta , bartaan waxyaabo cusub - ugu yaraan shabakadda - oo ah il aan laga dulqaadan karin. Taasi waa qodobka door bidaaya aaladaha sida Geopois, Udemy, Simpliv ama Coursera.
Waxaan ka helnay qadarinteena gobolka Geofumadas.
Marka la soo koobo, Geopois waa fikir aad u xiiso badan, kaas oo isku daraya xaaladaha suurtagalka ah ee macnaha guud sida soojeedinta tusmada, iskaashiga iyo fursadaha ganacsiga. Wakhti ku habboon jawiga geospatial-ka kaas oo noqda mid aad isugu dheellitiran maalin kasta oo nolosheena ah. Waxaan kugula talineynaa inaad ku booqato shabakada Geopois.com, LinkedIniyo Twitter. Aad baad ugu mahadsan tihiin Javier iyo Silvana oo qaatay Geofumadas. Ilaa waqtiga xiga.
Post Previous«Previous Vexel waxay soo saartaa UltraCam Osprey 4.1
Post Next Iskodland waxay ku biirtay Heshiiska Qeybta Dadweynaha ee GeospatialNext »